छोटो समयमा नै राम्रो लोकप्रियता कमाएको क्लब हाउस के हो ? - Arthasansar
छोटो समयमा नै राम्रो लोकप्रियता कमाएको क्लब हाउस के हो ?
आइतबार, ०६ असार २०७८, १२ : ५५ मा प्रकाशित
पछिल्लाे समय प्रविधिकाे प्रयाेगहरू दिनानुदिन बढ्दै गएकाे छ । विश्व नै प्रविधिमैत्री बनेकाे छ । प्रविधिका नयाँ-नयाँ माध्यमहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । झन् सामाजिक सञ्जालहरूमा त प्रयाेगकर्ताहरूकाे माेह नै छुट्टै हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालकै बारेमा कुरा गर्नुपर्दा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये आजकाल एकाएक चर्चामा आएकाे छ, क्लब हाउस । नेपालमा छाेटाे समयमा नै क्लब हाउसले राम्राे लाेकप्रियता पाएकाे छ । काेराेना भाइरसकाे कारण लागू निषेधाज्ञाले गर्दा प्राय मानिसहरू घरभित्रै बसेका छन् । घरमा बस्दा हरेक व्यक्तिकाे अधिकांश समय माेबाइलमा नै व्यतित हुन्छ । माेबाइल चलाउँदा यस्ता नयाँ-नयाँ सामाजिक सञ्जालहरूप्रति त झन् प्रयाेगकर्ताहरू रूची बढ्ने भयाे नै ।
क्लब हाउस भनेकाे के हाे ?
विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये, क्लब हाउस पनि एउटा सामाजिक सञ्जाल एप हाे । खासगरी सन् २०२० मा पल डेभिसन र रोहन सेथले स्टार्टअपको रूपमा डिसकसन प्लेटफर्मका लागी क्लब हाउस बनाएका थिए । आईओएस भर्सनमा मात्र सीमित गरिएकाले त्यतिबेला प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्न सकेकाे थिएन । याे एप एन्ड्रोइड भर्सनमा ल्याइएपछि भने यसले व्यापक चर्चा पाएकाे छ । क्लबहाउसमा एउटै रुममा पाँचहजारसम्म व्यक्ति सहभागी हुन सक्नेछन् । याे एउटा भर्चुअल रूम हाे । यो एपमा तीन किसिमका भर्चुअल रुम छन् । ती हुन् : ओपन रुम, सोसियल रुम र क्लोज्ड रुम ।
यस एपमा आवाजको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरुबीच विभिन्न विषयमा सामूहिक र छुट्टाछुट्टै रूममा ‘भ्वाइस’ को माध्यमबाट जोडिन सकिन्छ । क्लब हाउसमा प्रयोगकर्ताहरूले आफूलाई मन लागेको विषयमा भइरहेको कुराकानी सुन्न वा आफैले समुह बनाई अन्तक्रिया गर्न सक्नेछन् । क्लब हाेउस मनोरञ्जन र ज्ञान दुवै हिसाबमा उपयोगी छ । क्लब हाउसले संवाद तथा अन्तक्रियामा हुने आवाजलाई मात्र सपोर्ट गर्दछ । क्लब हाउसमा फोटो वा भिडियोको नाममा प्रोफाइल तस्वीर मात्र हुन्छ । क्लब हाउस भनेकाे कुनै एक विषयमा एउटा कोठाभित्र छलफल गरेजस्तै हो ।
क्लब हाउस कसरी खाेल्ने ?
सर्वप्रथम प्रयाेगकर्ताले याे एप आफ्नो मोबाइलमा डाउनलाेड गर्नुपर्छ । त्यसपछि याे एप चलाउन यसभन्दा अघि नै क्लब हाउसका प्रयोगकर्ताको इन्भाइटपछि मोबाइल नम्बरमा आएको कोड वा लिंक राख्नुपर्छ । क्लब हाउसमा एकजना प्रयोगकर्ताले ५ जनालाई भन्दा धेरैलाई निःशुल्क इन्भाइट गर्न मिल्दैन ।यो एपमा आफुलाई लागेको विषय राख्न हात उठाएको संकेत थिच्नुपर्छ । यदि बोल्नु छैन भने सुनेर मात्र बस्न सकिन्छ ।
क्लब हाउसकाे बारेमा जान्नैपर्ने ३ कुराहरू :
१. क्लब हाउस नयाँ अडियो-मात्र भएकाे सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म हो ।
२. कुनैपनि प्रयाेगर्तालाई क्लब हाउसमा सामेल हुन निमन्त्रणा चाहिन्छ ।
३. क्लब हाउसमा सबै कुरा प्रत्यक्ष र वास्तविक समयमा हुने गर्दछ ।